MDC Yopindwa Nerushambwa
Gumiguru 26, 2007
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muMDC kuManicaland zvichitevera kubviswa pachigaro kwasachigaro webato mudunhu iri, VaGodfrey Svosve Mubatsa. Asi hapana ari kunyatsobuda pachena kuti zvinhu zviri kufamba seyi mubato iri.
Zvichakadaro, varume vashanu muGweru vebato reMDC, vanzi nedare vabvise mari yechibatiso inoita $5 million pamunhu mushure mekusungwa nemhosva yekuita mhirizhonga nevamwe vavo mubato iri.
Izvi zvinotevera makakatanwa aripo pakati pezvikwata zviviri, chimwe chiri kutungamirwa nameya weguta iri, VaSesil Zvidzai, nechimwe chinotungamirirwa nemunyori webato iri mudunhu iri VaPatrick Kombayi.
Bato iri rinenge rapindwa nerushambwa rwemakakatanwa, ayo ave kunzi nevamwe angangorisvitsa muna taisireva. Kubva pakaputswa gungano remadzimai rebato iri, zvinhu hazvina kuzoratidzika zvakanaka mune mamwe matunhu ebato iri akaita seSouth Africa, London, Mutare, zvichisanganisirawo nemuGweru.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaGlen Mupani, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti makakatanwa aya ava kukonzerwa nekugarisa kwaita vatungamiri vari pazvigaro.